e.l.f.Studio Moisturizing Lipstick | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Cheeky Coral Cutie Crazy Cranberry Flirty & Fabulous Orange Dream Party in the Buff Pink Minx Ravishing Rose Red Carpet Rosy Go Round Velvet Rope Wine Tour Wink Pink
ဗီတာမင် အေ၊စီ၊အီး ပါဝင်ခြင်း
9 နှုန်းအား အခြေခံ၍
ပြုလုပ်သည့် နေ့စွဲ အမှတ်ပေးချက်အများဆုံး အဆိုးဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
2016 ဇှနျ 3
နုတ်ခမ်းနီဆိုရင် elf လိုကောင်းကောင်းဝယ်မှ နုတ်ခမ်း အတွက် စိတ်ချရပါတယ်။ elf ကရေဓါတ်ပါလို့ ပိုကောင်းတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
e.l.f. Studio moisturizing lipstic
ဒီ နှုတ်ခမ်းနီကရေဓါတ်ပါပြီး ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ အီး ပါဝင်လို့ နှုတ်ခမ်းသားကို စိုပြေလှပါစေပါတယ်။ အရောင်ကကလည်း ပြထားတဲ့အရောင်အတိုင်း နှုတ်ခမ်းသားပေါ်မှာ တထပ်တည်းကျတဲ့အတွက် အရမ်းကြိုက်တယ်..ဒါလေးဆိုးပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းကိုစိုပြေလှပစေပါတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
I'm in love with this new Moisturizing lipstick. I'm using Red Carpet and it's all about your lips. =) နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
May Nobel Shein
2016 မေ 25
e.l.f နှုတ်ခမ်းနီတွေက ဆွဲလို့ကောင်းပြီး အရောင်လည်းခံပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေလည်း စုံလို့ သဘောကျပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2016 ဖဖေျောဝါရီ 5
e.l.f brand cosmetics တွေက အရမ်းကောင်းတယ်။ အရမ်းကြိုက်တယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2016 ဇနျနဝါရီ 7
နှုတ်ခမ်းနီရဲ့ဆွဲသားကအရမ်းကောင်းတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားကို အစိုဓာတ်ထိန်းထားပေးတဲ့အပြင် အချိန်တော်တော်ကြာနှုတ်ခမ်းပေါ်မှာစွဲစေတယ်။ အရောင်လေးလဲလှတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2015 မေ 5
shop မှာဝယ်တာအရမ်းလည်းအဆင်ပြေတယ် လာပို့တာလည်းအရမ်းမြန်တယ် ၀န်ဆောင်မှုလည်းအရမ်းကောင်းတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Studio Moisturizing Lipstick